केयुमा नेपाल टेक्नोलोजी इनोभेशन सेन्टर भवन निमार्ण सुरु – Radio Roshi
केयुमा नेपाल टेक्नोलोजी इनोभेशन सेन्टर भवन निमार्ण सुरु
in शिक्षा / समाचार — by Roshikhabar —	September 14, 2020
रोशी सहकर्मी–भदौ २९,
काठमाडौ विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय परिसर धुलिखेलमा दक्षिण कोरियाली सरकारको सहयोगमा सञ्चालित एकिकृत ग्रामीण विकास परियोजना अन्तरगत नेपाल टेक्नोलोजी इनोभेशन सेन्टर (एन.टी.आई.सी) भवन निमार्ण सुरु भएको छ ।
परियोजनाका लागि १० मिलियन डलर मध्ये भवनका लागि चार मिलियन डलर खर्च गरिने काठमाडौं विश्वबिद्यालयका प्राध्यापक डा. हेमराज काफ्ले जानकारी दिनुभयो ।
शिल्यान्यास कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वबिद्यालयलका उपकुलपति डा. रामकण्ठ माकाजूले कृषि, ग्रामीण विकास, वैकल्पिक र नवीकरणीय उर्जा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्वस्तरीय अनुसन्धान गर्न भवन उपयोगमा आउने बताउनुभयो ।
गतिशिलता प्राप्त गर्न विश्वविद्यालयले शुरु गरेको अनुसन्धानको क्षेत्रले सहयोग पुग्ने उपकुलपति डाक्टर माकाजूको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष एवम् धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार ब्याञ्जू, काठमाडौं विश्वविद्यालयका संस्थापन उपकुलपति डा. सुरेशराज शर्मालेले नेपालमा पठनपाठनसँगै समुदायको आवश्यकता पुरा हुने शिक्षा उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउनु भयो ।
उक्त भवन निर्माणका लागि लुम्विनी विल्डर्स प्रालिले ठेक्का पाएको छ । भवन निर्माणका लागि सामग्री ल्याउँदा लाग्ने भ्याट नेपाल सरकारले छुट गरेको काठमाडौं विश्वविद्यालयले जनाएको छ। यो भवन सन् २०२३ भित्रमा निर्माण सम्पन्न हुने छ ।
भवन करिब तीन हजार १ सय १७ बर्ग मिटरमा निर्माण हुने छ ।
यसैगरी, नेपाल टेक्नोलोजी इनोभेसन सेन्टर (एन.टी.आई.सी) संस्थाको आधिकारिक वेबसाइटको काठमाडौं विश्वबिद्यालयलका उपकुलपति डा. माकाजूले प्रारम्भ गर्नुभयो ।